Misoko miadana toa tsy re tsaika akory ankehitriny ireo olana maro atrehin’ny firenena.
Tsy hisy vahoaka hanakana
Tsy hisy vahoaka hanakana ny mpitondra azy mihitsy eo na hifidy hamerina ny fitsidihana izao tontolo izao ao anatin’ny 80 andro toy ilay tantara malaza iray izay aza.
Miandry fiovana ifotony
Ny fanazavana ny toe-java misy dia tsy maintsy hisy foana ary tonga amin’ilay fitenin’ny mpanao politika iray izay izy io hoe arakaraky ny solomaso hanaovana ny fetran’ny hita.
Indrisy fa nihemotra tamin’ny lafiny rehetra ny firenena, mahantra ny vahoaka fa olom-bitsy no tena misitraka ny harem-pirenena. Zary fanesoana ilay Madagasikara manan-karena fa ilay hoe mahantra eo ambonin’ny harena angamba no mitombina kokoa. Tena izao tokoa ve ny lalana nirian’ny vahoaka Malagasy ? Izao ve ny atao hoe fandrosoana sy fampandrosoana maharesy lahatra azy ? Maro ny ambara fa asa fampandrosoana ezahina handresen-dahatra ny Malagasy fa tena ireny tokoa ve ilay andrasany sy iriany ? Trano mijoalajoala, tanàna goavana Tanamasoandro,… Tsy ratsy ireny, saingy tsy ireny angamba aloha hatreto no atao hoe: fandrosoana ho an-dRamalagasy fa ny fahavitany tena ara-tsakafo, fisitrahana rano fisotro madio sy ara-dalàna, ny fananany asa mahavelona, ny firoboroboan’ny asa fihariany izay ny 80% no tantsaha,.. Mety misy ny tsy fahaiza-mitantan’ny mpitondra fanjakana sy tsy fitovian’ny mety ho laharam-pahamehana ho azy sy ny an’ny valalabemandry. Sao dia ny vahoaka ihany koa no minia mikipy sy toa efa voaborosy hanaiky sy hiari-pery eo anatrehan’ny efa hita izao fa mizana tsindrian’ila, kely tsy mba mamindro, famarotan-tanindrazana mivantana na ankolaka ? Lavitra loatra ny hantsana manelanelana ny mpitondra sy ny entina. Sa izao ihany koa no tonga amin’ilay hoe: vahoaka maditra ka mahazo mpitondra adala ?